Izibonelelo ze-microalgae njengee-biofuels | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Izibonelelo ze-microalgae njenge-biofuels
Adriana | | Izinto eziphilayo, Biodiesel
Kule minyaka imbalwa ibiphanda kwaye izama ezincinci ezincinci ukuzisebenzisa ekwenzeni Iibhayoloji kuba zinezibonelelo ezininzi ngaphezulu kwezinye izinto ezingekenziwa. I-Microalgae okwangoku isetyenziselwa ukusetyenziswa kwamayeza, ukutya, njl.
Ezi microalgae zii-photoautotrophic unicellular microorganisms, ezinamandla okufumana amandla kwimitha ekhanyayo kunye nokwenza i-biomolecule yazo ngokusisiseko ikharbon diokside (CO2) kunye namanzi.
Ezinye zezona zibalulekileyo zezi:
I-Microalgae ininzi kwiplanethi kungekuphela nje ngobuninzi kodwa nakwiindidi. Iindidi ezingama-30.000 ze-algae ziyaziwa kodwa zingama-50 kuphela ezifundwe ngokweenkcukacha kwaye yi-10% kuphela esetyenziselwa injongo ethile yorhwebo. Ke kukho amathuba amahle okufumana iziphumo ezilungileyo kwabo bangekafundi.
Banobuchule bokusetyenziselwa ukwenza iimveliso ezahlukeneyo ezinje nge bioethanol iiCarbohydrate zakho, biodiesel yeelipids okanye ioyile, biogas kwaye ndicinga ngeenkomo zeeproteni zazo.
Enye yeenzuzo ezinkulu ze-microalgae kukuba banokuphuhlisa ityuwa, amanzi amatsha kunye nentsalela, ke banolungelelwaniso oluhle. Kwaye ivumela ukuba kungabikho mhlaba usetyenziselwa ukulima.
Ukuveliswa kwezi microalgae kuyavumela ukufunxa CO2 yeatmosfera.
I-Microalgae zizinto eziluhlaza ezikhulu amandla ukuba uninzi lwazo lusekwinqanaba lophando nololingelo.
Kodwa kulindeleke ukuba ngexesha elifutshane iimveliso ezintsha ziya kuphuhliswa ngokusekwe kuzo zinengeniso yezoqoqosho kwaye zizinzile kwezendalo.
I-Microalgae inokuba yinxalenye yesisombululo seengxaki kuluntu lwanamhlanje lwe iifosili kunye nongcoliseko abalivelisayo. Kuba zihlala kwindalo kodwa kufuneka uziqonde ukuze zikwazi ukuzisebenzisa kwaye zixhaphaze zorhwebo.
UMTHOMBO: Ingcali yezoqoqosho. yi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Izinto eziphilayo » Biodiesel » Izibonelelo ze-microalgae njenge-biofuels
Izindlu zeBioclimatic (1). Ukuqhelaniswa noMzantsi
Ukunyuka kwexabiso leoyile kunye neziphumo zalo kwezentlalo